Sharci cimilo oo ay suurtogal tahay in la hirgeliyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Det kostar i dag ungefär 40 kronor att släppa ut ett ton koldioxid. Foto: Saul Loeb/TT
Sharci cimilo oo ay suurtogal tahay in la hirgeliyo
"Waxtar u leh cimilada"
La daabacay onsdag 10 februari 2016 kl 12.24
Sweden waxay u baahan tahay sharci cimilo si howl-hasha lagu yareynayo wasaqda hawada lagu sii daayo u noqoto mid wax ku ool leh.
Sidaas waxaa ku taliyey guddi barlamaani ah oo loo saaray ka soo baraandegidda sida lagu hagaajin karo shaqada dowladda Sweden ee bay’adda.
− hindiseahaan waxuu mid waxtar leh ka dhigi kara shaqada lagu hagaajinayo cimilada mid wax ku ool ah. Go’aan baarlamaan in la beddelo waa sahlan tahay laakiin ma sahlano in la beddelo sharci degan, ayuu yeri guddoomiyaha guddiga Anders Wijkman, mar uu sharaxayey waxuu sharci ku kordhinayo shaqada cimilada.
Haddii ay tahay Sweden in ay ka soo baxdo kaalinta kaga soo aadey heshiiskii ay waddamada caalamka ku geereen magaalada Baris ee looga xaajoonayey cimilada, oo lagu heshiisyey in lagu hayo wax ka hooseeya labo derayo heerkulka caalamka boqolkan sanno ee lagu jiro, markas waa in Sweden sii hagaajiso howlaha shaqo ee cimilada ka heyso.
Qayb ka mid ah hindisahan oo dhawaan baarlamaanka la horkeeni doono ayaa ku talineysa in Sweden hirgeliso sharci cimilo kaas oo damanad siinaya in ay halkeeda ka soo socoto hadefyada uu baarlamaanka dejiyo ee wax looga qabanayo cimilada, xataa haddii dowlad cusub maamulka waddanka la wareegto.
Sharciga cimilada ayaa markas dowladda kasta oo cusub ku qasbaya in ay soo bandhigto qorshe howleed la xiriira sida loo gaari karo hadefka lagu yareynayo wasaqda cimilada. Shaqada ay dowladda ka qabto howlahana waxaa ukuurgalaya oo dabogel ku sameynaya hey’ad madax banaan oo qaabilsan cimilada, hey’addaa oo u dhiganta hey’adda maanta ukuurgasha siyaasadda dhaqaalaha ee dowladda.
Guddiga baarlamaaniga ah ee cimilada waxuu sidoo kale ku taliyey in la sii xoojiyo goolka cimilada Sweden ee oranaya in sannadka 2050 wasaqda hawada lagu siidaayo ahaato eber. Waxuuse beddelkeeda ku taliyey in la hirgeliyo hadef ah cimilo dhex-dhexaad ah oo la gaaro sannadk 2045, taas micnaheeda noqoneyso heerka waqsada hawada lagu sii daayo ay hoos u dhaceyso boqolkii 80 oo u dhiganta heerkii wasaqda hawada lagu sii daayo jogtay 1990kii. 15 procent ee dhimanna lagu gaaro siyaabo kale. Sida in la badiyo dhirta la beero si ay dhirta u dhuuqdo in badan oo ak mid ah koldioxid-ka ama la badiyo isticmaalka farsama lagu soo koobo CCS ee qabata koldioxid.
Inkastoo hadefka 2045 uu shan sanno ka horeeyo hadafkii sannadka horey loo dejiyey ee sannadka 2050, hadana waa mid faa’ido weyn u leh cimilada, sida uu yeri Anders Wijkman.
− Micno weyn bay ku fadhidaa. Maadaame koldioxid-ka uu hawada ku keydsamo, marka micno badan bay leedahay. Weliba todobo xisbi ayaa taageersan hadefkan ah boqolkii 85. Taasna waa horumar, ayuu yeri Anders Wijkman oo ah guddoomiyaha guddiga cimilada.